Extra Deep Heat - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Extra Deep Heat
Extra Deep Heat ကဘာလဲ။
Generic Name: Extra Deep Heat Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Extra Deep Heat ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Extra Deep Heat ကိုအဆစ်ရောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ သာမန်နာကျင်ကိုက်ခဲမှုဝေဒနာ၊ နောက်ကျောနာကျင်ခြင်း၊ ဒဏ်ဖြစ်ခြင်း၊ အဆစ်လည်ခြင်း၊ အညိုမဲစွဲခြင်းတို့ ယာယီသက်သာစေဖို့ အဓိကအသုံးပြုပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းအခြားအခြေအနေတွေအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Extra Deep Heat ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Methyl salicylate ကိုဆေးညွှန်းမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒါမှမဟုတ် သင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျ လိုက်နာအသုံးပြုပါ။ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ဆေးအတိုးအလျော့လုပ်ခြင်း၊ ရေရှည်စွဲပြီးအသုံးပြုခြင်းမပြုလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးလိမ်းမယ့်နေရာတဝိုက်ကအရေပြားကိုသန့်ရှင်းခြောက်သွေ့နေအောင် ဂရုစိုက်ပါ။
Methyl salicylate ကိုအနာရှိတဲ့နေရာ၊ နေလောင်၊ လေလောင်ထားတဲ့ အရေပြား၊ ခြောက်သွေ့ကွဲအက်နေတဲ့ အရေပြားနဲ့ အခြားအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ထိခိုက်ထားတဲ့ အရေပြားပေါ်မလိမ်းသင့်ပါဘူး။
ဆေးလိမ်းတဲ့အခါမှာလည်းခပ်ပါးပါးသာလိမ်းပြီး ခန္ဓါကိုယ်ထဲ လုံးဝစိမ့်ဝင်သွားတဲ့အထိ ဖြည်းညှင်းစွာပွတ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Extra Deep Heat ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Extra Deep Heat ကိုအခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Extra Deep Heatကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။Extra Deep Heat ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Extra Deep Heatကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Extra Deep Heat အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Extra Deep Heatသို့မဟုတ် အခြားဆေးဝါးများတွင်ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
ထိခိုက်ထားသည့်နေရာ (ဆေးလိမ်းမည့်နေရာ) တွင် ဒဏ်ရာအနာရှိနေခြင်းသို့မဟုတ် အရေပြားပျက်စီးနေခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Extra Deep Heat ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Extra Deep Heat ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Extra Deep Heat ကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့
မျက်နှာ၊ ပါးစပ်၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာတို့ ရောင်ရမ်းခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Extra Deep Heat နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Extra Deep Heatဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Extra Deep Heat နဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတွေကတော့
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Extra Deep Heat နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Extra Deep Heatက အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Extra Deep Heat နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Extra Deep Heatဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Extra Deep Heat ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
နာကျင်ကိုက်ခဲမှုဝေဒနာ ဖြစ်နေတဲ့နေရာတဝိုက်သင့်ဆရာဝန် ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဒါမှမဟုတ် ဆေးညွှန်းမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းခပ်ပါးပါးလိမ်းပေးပါ။
ကလေးတွေအတွက် Extra Deep Heat ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးလူနာများမှာဘယ်လောက်အချိုးအစားပေးရမလဲဆိုတာအတည်မပြုရသေးပါ။ သင့်ကလေးငယ်အတွက် အသုံးပြုရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်မှာစိတ်ချရမှုအနေအထားကိုအပြည့်အဝနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ
Extra Deep Heat ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Extra Deep Heat ကို ၃၀ ဂရမ်ပါဝင်တဲ့ လိမ်းဆေးခရင်မ်ပုံစံနဲ့ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Extra Deep Heat ကိုလိမ်းဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးလိမ်းပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ဆေးလိမ်းရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲလိမ်းလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးလိမ်းတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။